Hay,ada wadaniga ah e Yovenco Dibudhis Iskuul iyo Ardayda Duruufaha Cimiladau saameeyaan u fidisay waxbarsho | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Hay,ada wadaniga ah e Yovenco Dibudhis Iskuul iyo Ardayda Duruufaha Cimiladau saameeyaan...
Hay,ada wadaniga ah e Yovenco Dibudhis Iskuul iyo Ardayda Duruufaha Cimiladau saameeyaan u fidisay waxbarsho
Dugsiga Xaji Yusuf Iimaan waxa uu ka mid yahay dugsiyada ka faa’iidaystay mashruuca waxbarashada ee Education in Emergency (EIE) mashruucaasi waxaa maalgaliyey haayada arimaha caruurta u qaabilsan Qaramada midoobay ee UNICEF, isla markaana waxaa fulinayey haayada wadaniga ah ee YOVENCO.
Roob yaraan ka jirtay dhowrkii sanadood ee u danbeeyey guud ahaan gobolada soomalilaand ayaa waxay sababeen in ay dalka oo dhan soo foodsaarto abaar baahsan oo saamaysay dalka oo dhan cidhif ilaa cidhif. Abaar raagtay iyo sidoo kale colaado sokeeya oo iyaguna ka jiray gobolada qaar ayaa sababay in ay dad badani ka barakacaan dhulkii ay deganaayeen. Sidaasi oo kale waxay abaarahaasi iyo colaadahaa is huwan hakad ama khalkhal galiyeen habsami socodkii waxbarashada arday aad u tiro badan kuwaasi oo u baahan teegeero degdeg ah.
Hadaba ardayda ay saameeyeen dhibaatooyinka abaaraha, colaadaha sokeeye iyo barakaca waxaa ka mid 7895 iyo 13875 arday oo ka mid ahaa ardaydii lagu soo daray dugsiyada waxbarashada wakhtigii ay socdeen labada mashruuc ee ay taageerto Haayada UNICEF ee kala ahaa EAC iyo EIE. Sidaa daraadeed waxaa muhiim ah ardaydaasi in ay helaan taageero waxbarasho si ay suurtagal u noqoto in ay sii wataan waxbarashadooda.
Sida ay sheegayaan xogihii laga soo uruuriyey masiibooyinka sameeyey dhamaan gobalada kala duwan ee soomaalilaand waxaa ay dhibaatooyinka colaadaha sokeeye, abaaraha raagay,duufaanada iyo barakacu ay saameeyaan arday gaadhaysa 35000, kuwaasi oo u badan dadka xoola dhaqatada ah iyo beeraylada ku nool dhulka miyiga ah. Sidaasi oo kale masiibooyinkaasi waxay sababeen in dad badan oo reer miyi ahi ay soo galaan magaalooyinka kala duwan ee dalka ka dib markii ay ka dhamaadeen xoolihii ay noloshoodu ku tiirsanayd. Hadaba dadkaa baracayaasha ah ee soo galay magaalooyinku waxay culays farabadan saareen goobaha waxbarashada ee ka jira deegaanada ay ku soo barakaceen.
Sidaa daradeed ujeedada mashruucani waxaa weeyi in taageero waxbarasho oo ku haboon la siiyo caruurta ay soo barakiciyeen abaaraha, duufaanada iyo colaadaha sokeeye. Sidaasi daradeed waxay taageero u fidisay Haayada qaramada midoobay ee UNICEF iyadoo kaashanaysa Haadayada wadaniga ah ee Yovenco 33,585 arday oo ka mid ah ardaydii taageerada waxbarasho ka helay haayada UNICEF abaarihii dalka ka dhacay 2017. Sidoo kale waxay haayada UNICEF taagerada waxbrasho u fidisay 6480 arday oo cusub oo ay ka mid yihiin (2916 hablood) iyadoo awooda la saarayo 36 dugsi oo ka tirsan deegaanada ay masiibooyinku saameeyeen ee gobolada Saxil, togdheer iyo Maroodi jeex.
Hadaba waxa ay fulinaysaa haayada wadaniga ah ee YOVENCO iyada oo ku shaqaynaysa siyaasada Wasaarada Horumarinta Waxbarashada ee Soomaalilaan mashruuca lagu taageerayo ardayda ay saameeyeen masiibooyinka dabiiciga ah, iyadoo ardayda dhigata dugsiyada mashruucan laga hirgalinayo ay heli doonaan deeq lacageed oo dugsi waliba ku isticmaali doono baahiyaha ugu muhiimsan ee ka jira. Sidaasi oo kale waxqabadyada mashruucan waxaa ka mid ah Tababarada gudiyada waxbarashada, kormeerka dugsiyada, dardargalinta nadaafada iyo fayo-dhawrka iyo wacyi gelin ku saabsan in ardayda la keeno dugsiyada waxbarashada.
Dugsiyada ka faa’iidaystay mashruucan waxaa ka mid ah dugsiga hoose/dhexe ee Xaji Yusuf Iimaan oo ku yaala magaalada goda-weyn kana tirsan degmada sheekh ee gobolka saaxil. Dugsigani waxaa hareeraha ka xiga deegaan aad u balaadhan oo ay ku dhaqan yahay dad iskugu jira xoola dhaqato iyo beeralay wax ku beerta biyaha roobka ee wakhti roobaadka, dadkaasi oo mid ah dadyowga ay sameeyeen abaarihii baahsanaa ee dalka ka dhacay. Dugsigani wuxuu kaga faa’iidaystay deeqdii lacageed ee uu saamiga u helay dayactirka afar fasal iyo laba suuli, biyo dhaaminta ardayda,nusasaacaha ardayda, qalabka nadaafada dugsiga, gunada laba macalin, dayactirka kuraasta iyo miisaska ardaydu wax ku barato, waxay soo iibsadeen qalabka laydhka ee soolarta iyo dhismaha qayb ka mid ah fasal lagu kordhinayey dugsiga.
Previous articleDeg Deg, Afhayeenka Booliiska Kenya oo Warkii u danbeeyaay sheegay xaalada Hoteeelkii la Weerary
Next articleCanfar gadooday oo jaray jidka marinka u ah xamuulka ugasoo dega ethiopia dekada jabuuti